China Pillow Block Bearings abakhiqizi nabaphakeli | Xinri
● Ukusebenza okuyisisekelo kufanele kufane nokwamabhere ebhola ajulile.
● Inani elifanele le-ejenti yokucindezela, asikho isidingo sokuhlanza ngaphambi kokufakwa, asikho isidingo sokwengeza ingcindezi.
● Kusebenza ezikhathini ezidinga okokusebenza nezingxenye ezilula, ezifana nemishini yezolimo, izinhlelo zokuhamba noma imishini yokwakha.
Ukuthwala kwebhulashi lomcamelo empeleni kuhlukile kokuthwala kwebhola okujulile. Indandatho yayo engaphandle yobubanzi bobubanzi obungaphandle iyindilinga, engafaniswa nesihlalo esihambisanayo se-concave esiyindilinga esidlala indima yokuqondanisa. Umzimba wangaphandle oyindilinga usetshenziselwa ikakhulukazi ukuthwala imithwalo ehlanganisiwe ye-radial kanye ne-axial okuyimithwalo esabalalayo ikakhulukazi. Ngokuvamile, akufanelekile ukuthwala imithwalo ye-axial yedwa.
Ububanzi bayo bangaphandle buyindilinga, obungafakwa endaweni eqondile eyindilinga yesihlalo sokuthwala ukuze udlale indima yokuqondanisa. Amabheringi amabhulokhi omcamelo asetshenziselwa ukuthwala imithwalo ehlanganisiwe esabalalayo kanye ne-axial, okuyimithwalo esabalalayo ikakhulukazi. Ngokuvamile, akufanelekile ukuthwala imithwalo ye-axial yedwa.
Ukumelana okungu-1.Low, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukusebenza kahle kwemishini, kulula ukuqala; Ngokunemba okuphezulu, umthwalo omkhulu, ukugqoka okuncane, impilo ende yokusebenza.
Usayizi we-2.Standardized, ukushintshana, ukufakwa okulula nokuqaqa, ukugcinwa okulula; Isakhiwo esihlanganisiwe, isisindo esincane, usayizi omncane we-axial.
3.Ezinye izinhlayiya zinokusebenza kokuziqondanisa; Ifanele ukukhiqizwa ngobuningi, ikhwalithi ezinzile nethembekile, ukusebenza kahle kokukhiqiza okuphezulu.
4. Idamu lokudonswa kweTransmission liphansi kakhulu kunokuthwala ingcindezi enamandla, ngakho-ke ukukhuphuka kwezinga lokushisa nokusetshenziswa kwamandla kuphansi; Isikhathi sokuqala sokungqubuzana siphezulu nje kancane kunesikhathi sokushayisana okujikelezayo.
5. Ukuzwela kokuthwala ukusonteka ukulayisha izinguquko kungaphansi kokuthwala kwe-hydrodynamic.
6. Usayizi we-Axial mncane kunowokuthwala kwendabuko kwe-hydrodynamic; Iyakwazi ukumelana nomthwalo osabalasayo osindayo nobukhulu.
7. Idizayini eyingqayizivele ingafinyelela ukusebenza okuhle kakhulu kunhlobonhlobo yomthwalo osheshayo; Ukusebenza kokusebenza akunandaba nokushintshashintsha kokulayisha, isivinini kanye nejubane lokusebenza.
Amaphutha we-pillow block ethwele isihlalo
1.Umsindo omkhulu.Ngenxa yesivinini esikhulu sokuthwala okuyindilinga kwangaphandle nesihlalo, kuzokwenza umsindo omkhulu lapho usebenza.
2. Isakhiwo sezindlu ezihlanganayo siyinkimbinkimbi.Ukuze kuhlangatshezwane nokusetshenziswa kwezinhlobo ezahlukahlukene zamabhere, ukwakheka kwezindlu ezithwalayo kuyinkimbinkimbi ngokwedlulele, futhi izindlu eziveza izindlu nazo zikhuphula izindleko zokukhiqiza zomkhiqizo, okuholela ezindlekweni zonke ukubonakala kwangaphandle okuzungezile kwesihlalo kuphakeme.
3. Noma ngabe amabheringi athanjisiwe kahle, afakwe kahle, angaqinisekisi ngothuli nobufakazi bomswakama, futhi asebenza ngokujwayelekile, ekugcineni azokwehluleka ngenxa yokukhathala kwendawo yokuxhumana egingqikayo.
I-pillow block bearing ivame ukusetshenziswa kwezimayini, insimbi, ezolimo, imboni yamakhemikhali, izindwangu, ukuphrinta nokudaya, ukuhambisa imishini, njll.
Langaphambilini Uchungechunge lokufaka okuphethe i-UCP 200 enembile
Olandelayo: Isondo Hub Amabombo
High Speed ​​Elisemqamelweni Block Amabombo
umcamelo block izindlu amabombo
nikeza ukuthwala kwe-pillow block
I-XRL brand china ethandwa kakhulu i-UCFL X00
Umkhiqizi waseChina ophethe i-UCPA edumile
Inani Competitive izinga okusezingeni Faka eziveza U ...
Ukufakwa kwekhwalithi ephezulu okunezindlu UCP X00
Uchungechunge lwezindlu oluqukethe i-UCP300
Izindlu zepulasitiki ezine-UCPH